နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖြိုခွင်းမှုတွေကြားထဲက အပင်ပန်းခံကာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ ပိုပို – Shwe Nay Chi
နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖြိုခွင်းမှုတွေကြားထဲက အပင်ပန်းခံကာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ ပိုပို
လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ ယခုလက်ရှိ အချိန်မှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြန်လည် ရရှိရေးအတွက် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အားလုံးက တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တာဝန်ကိုယ်စီယူကာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် မဆုတ်နစ်သော ဇွဲလုံလတွေနဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်နေကြတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြိုခွင်းမှုတွေကလည်း နေရာဒေသအနှံအပြားမှာ ဖြစ်ပွားနေတာ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတဲ့ ပြည်သူများရဲ့ရှေ့တွင် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များက မားမား မတ်မတ် ရပ် တည်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနုပညာရှင်တွေကလည်း သူတို့နိုင်သလောက် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင် လှုပ်ရှားနေတာ ဖြစ်ပြီး တချို့အနုပညာရှင်တွေကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းမပေါ်ကို မထွက်နိုင်တော့ပဲ တိမ်းရှောင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး အခြေအနေတွင် ပြည်သူတွေကလည်း ပိုပြီး စည် းလုံးညီညွှတ်ကြကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကူညီဖေးမရင်း ယုံကြည်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို အတူလက်တွဲသွားနေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် ပိုပိုကလည်း နေ့တိုင်း လမ်းမပေါ် ထွက်ကာ ပြည် သူလူထုနဲ့ အတူ တရားမျှတမှုအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ပါဝင်အားဖြည့်ကာ အေးချမ်းစွာ ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်တွေကို ဖော် ထုတ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း ပိုပိုရဲ့ လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်တွင် “လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများကို လက်နက် နဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို အလွန်တရာမှ ရွံရှာ စက်ဆုပ်ပါသည်”ဆိုပြီး ရေးသားကာ လူ ထုလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလာတာ ဖြ စ်ပါတယ်။ကဲ….ချစ်ပရိ သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်ကူးယူ မျှဝေပေးရင်း ပြည်သူတွေ အသက်အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေပြီး ဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေ……???
နှဦေးတျောလှနျရေး အောငျမွငျဖို့အတှကျ ဖွိုခှငျးမှုတှကွေားထဲက အပငျပနျးခံကာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ ပူးပေါငျးပါဝငျနတေဲ့ ပိုပို
လူထုလှုပျရှားမှုကွီးဟာ ယခုလကျရှိ အခြိနျမှာတော့ စဈမှနျတဲ့ ဒီမိုကရစေီပွနျလညျ ရရှိရေးအတှကျ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား အားလုံးက တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ တာဝနျကိုယျစီယူကာ တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂတျအတှကျ မဆုတျနဈသော ဇှဲလုံလတှနေဲ့ ကွိုးစား အားထုတျနကွေတုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖွိုခှငျးမှုတှကေလညျး နရောဒသေအနှံအပွားမှာ ဖွဈပှားနတော ဖွဈပွီး ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒဖျောထုတျနကွေတဲ့ ပွညျသူမြားရဲ့ရှတှေ့ငျ မြိုးဆကျသဈ လူငယျမြားက မားမား မတျမတျ ရပျတညျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အနုပညာရှငျတှကေလညျး သူတို့နိုငျသလောကျ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပူးပေါငျးပါဝငျ လှုပျရှားနတော ဖွဈပွီး တခြို့အနုပညာရှငျတှကေတော့ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လမျးမပျေါကို မထှကျနိုငျတော့ပဲ တိမျးရှောငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး အခွအေနတှေငျ ပွညျသူတှကေလညျး ပိုပွီး စညျးလုံးညီညှတျကွကာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ကူညီဖေးမရငျး ယုံကွညျတဲ့ ပနျးတိုငျကို အတူလကျတှဲသှားနကွေတာ ပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုတျော ပိုပိုကလညျး နတေို့ငျး လမျးမပျေါ ထှကျကာ ပွညျသူလူထုနဲ့ အတူ တရားမြှတမှုအတှကျ အားသှနျခှနျစိုကျ လူထုလှုပျရှားမှုကွီးမှာ ပါဝငျအားဖွညျ့ကာ အေးခမျြးစှာ ရငျထဲက ဆန်ဒအမှနျတှကေို ဖျော ထုတျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာဆိုရငျလညျး ပိုပိုရဲ့ လူမူကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျတှငျ “လကျနကျမဲ့ ပွညျသူမြားကို လကျနကျ နဲ့ သတျဖွတျခွငျးကို အလှနျတရာမှ ရှံရှာ စကျဆုပျပါသညျ”ဆိုပွီး ရေး သားကာ လူထုလှုပျရှားမှု ပွုလုပျနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ။ကဲ….ခဈြပရိ သတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျကူးယူ မြှဝပေေးရငျး ပွညျသူတှေ အသကျအန်တရာယျမှ ကငျးဝပွေီး ဘေးရနျကငျးရှငျးကွပါစေ……???
ချို့တဲ့ပြီးယိုင်နေတဲ့ အိမ်လေးကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းကာ အလှူငွေတွေ ဖေးမကူညီလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်